Showing ९१-१०० of ९६८ items.
नेपाली काङ्ग्रेस कहिले सुध्रिने ?
नेपाली काङ्ग्रेस गौरवशाली प्रजातान्त्रिक संसदीय इतिहास तथा चम्किलो र भरपर्दो भविष्य बोकेको पार्टी हो । सायद सबैभन्दा लामो समय प्रजातान्त्रिक समाजवादको अभ्यासमा लागेको र विभिन्न समयमा लामो सत्ताको अभ्याससमेत नेपाली काङ्ग्रेसले गरेको छ । विडम्बना चाहिँ यद्यपि २०१६ सालमा नेपाली काङ्ग्रेसले दुईतिहाई बहुमत ल्याएर सत्तामा पुग्यो तर, काङ्ग्रेस त्यतिबेला समेत आन्तरिक विवादमा थियो भनिन्छ । यस्तै गल्ती २०४६÷४७ को राजनीतिक परिवर्तनपछि बहुमत प्राप्त गरेको नेपाली काङ्ग्रेस आफूभित्रको आन्तरिक विवादकै कारण संसद् विघटन गरेर अन्तरिम निर्वाचनमा जानु प¥यो । नेपाली काङ्ग्रेसले ठूला–ठूला राष्ट्र
हाम्रो समाजमा हुने विवाह समारोह, भोज भतेर, अन्तिम संस्कार, समारोह जसमा दाजुभाइ, नातेदार, समाजको उपस्थिति हाम्रो सामाजिक प्रतिष्ठा तथा व्यवहारको निशानी हुन्थ्यो । त्यसमा खलल पुगेको छ । व्यक्तिहरू आफ्ना नजिकका नातेदारसमेतको दाह संस्कारमा उपस्थित हुन अन्कनाउँछन् । यो महामारीको प्रभाव यतिसम्म छ कि मरण परणमा सहानुभूति प्रकट गर्न निजको घरमा जानसमेत मानिसहरू हिच्किचाएका छन् । यसले निरन्तरता पायो भने कहीँ सहानुभूति व्यक्त गर्ने, हौसला बढाउने, आँसु पुछ्ने कुरा हाम्रो सभ्यता र परम्पराबाट हट्ने त होइन । कतै हामी सामूहिक जीवनबाट एकाङ्की जीवनशैलीमा त गइरहेका छैनौं । यसैगरी एक समयमा हाम्रो समाजमा चिकित्सक
अहिले संसार नै कोरोनाको महामारीबाट त्रसित रहेको छ । विश्वका सबै मुलुक यो महामारीबाट त्रसित रहेको बेला नेपाल पनि अछुतो रहने कुरै भएन । पौराणिक कथाका पात्रहरूका बारेमा जुन सृष्टिको भीमकाय शरीरका बारे कल्पना गरिएको थियो । एकाएक त्यस्ता मानव पात्रमा सयौं हात्तीको बल थियो भनेर सुनेका हौं तर, त्यतिबेलाको घटना जो आज कथाको रूपमा प्रचलित छ, युद्धमा भगवान् तथा ऋषिमुनिहरूले दिएको श्रापका कारण कल्पना गरिएको नयाँ चोला पाएका त्यस्ता व्यक्ति जसलाई राक्षस, असुर, दैत्य आदिले सम्बोधन गरिन्थ्यो । ती सबै एक झट्कामा नाश भएर बिलाएर गए । यी घटनाहरू हामीले देखेका छैनौं, प्रत्यक्ष देख्ने पनि आज संसारमा कोही छैन तर, य
कोभिड–१९ को त्रासले आर्थिक मारमा शहरी गरिब बालबालिका
हजुर तरकारी लिनुहोस् है ताजा तरकारी लौ हजुर आयो है आयो ताजा माछा, जिउँदो माछा हजुर जुत्ताचप्पल, जामा, गञ्जी, सर्ट लिनुहोस् है, सस्तोमा...... आजकल विराटनगर बजारमा स–साना बालबालिकाहरूले सकिनसकी रिक्सा कुदाउँदै शहरका टोल–टोलमा चिच्याउँदै घुमिरहेका हुन्छन् । कोहीले आफ्ना अभिभावकको सहयोग पाइरहेका हुन्छन् भने धेरै चाहिँ दाजुबहिनी वा दिदीबहिनी वा दाजुभाइ मिलेर सकिनसकी पालोपालो रिक्सा कुदाउँदै टोल–टोलमा व्यापार गर्न घुमिरहेका हुन्छन् । ६ महिनादेखि निरन्तर यसरी असिनपसिन हुँदै टोल–टोल घुम्नु उनीहरूको रहर होइन, बाध्यता हो । शहरीक्षेत्रमा बस्ने गरिब परिवारका बालबालिकाहरू कोरोना म
लेखकीय आँखीझ्यालमा पथरी बहुमुखी क्याम्पस
पूर्वाेत्तर मोरङ जिल्लामा अवस्थित पथरी बजार हरेक हिसाबले सुगम मानिन्छ । यस्तो अनुकूलता यहाँ हँुदाहुँदै पनि कयौं विषय र वस्तुस्थितिका कारण स्नातक तहको शिक्षा दिन नसकिरहेको अवस्थामा पञ्चायत माविको संयोजनकारी पहलमा स्थानीय राजनीतिक दल, सामाजिक अभियन्ता, शिक्षक, बुद्धिजीवी, व्यापारी–व्यवसायी, उद्योगी, सञ्चारकर्मी, स्थानीय अभिभावक तथा विद्यार्थीमाझ प्रतिनिधिमूलक भेलाले यस क्षेत्रमा स्नातक तहमा अनिवार्य जानुपर्ने बाध्यतालाई महसुस गर्दै २०६३ पुस १५ मा पथरी बहुमुखी क्याम्पसको स्थापना गरेको हो । प्रारम्भिक निर्णय कार्यान्वयनलाई निरन्तरता दिँदै तत्काल कार्यक्रम सञ्चालन गर्न, सोही मितिमा मोहनप्रसाद
(१) ‘विकासमा हामी चुकेकै एजेण्टहरूको बाहुल्यले गर्दा हो । एजेण्टहरूको प्रभाव हटाउन सरकार र एनसीबी, आईसीबीमा जानुको विकल्प छैन ।’ –(भोजराज पोखरेल, पूर्वसचिव) । (२) एजेण्टहरूकै चलखेलले बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना कहिले उत्तर, कहिले दक्षिणतिर फर्किएको छ । नेताहरूकै स्वार्थमा एजेण्ट हावी भएका हुन् ।’ –(दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री, पूर्वउपाध्यक्ष, राष्ट्रिय योजना आयोग) । (३) नेकपाका नेता घनश्याम भूसाल भन्छन्, ‘धन्न दस्तावेजमा नेपालको दलाल पुँजीवाद समाजवादको विरुद्ध आउनेछ भनेर लेख्यौं । एउटा खासवर्गले मात्र आफूलाई मुक्त गर्न सक्दैन । मुक्तिको प्रश्न राष्ट्रिय प्रश
प्रकाशित मितिः भदौ २४, २०७७
इण्डो–प्यासिफिक रणनीतिको शब्दावली सन् १९२० मा जर्मन भूगर्भविद् कार्ल हाउसफरले आफ्नो एकेडेमिक कार्यमा प्रयोग गरेका थिए । त्यसपछि क्रमैसँग २०१७ नोभेम्बर १० मा भियतनाममा सम्पन्न एसिया प्यासिफिक इकोनोमिक को–अपरेसन (एपेक) फोरममा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले पहिलो पटक इण्डो–प्यासिफिक रणनीतिको अवधारणा प्रस्तुत गरेका थिए । वास्तवमा इण्डो–प्यासिफिक रणनीति जापानले सुरुवात गरेको र अमेरिकाले आत्मसात गरेको हो । इण्डो–प्यासिफिक रणनीतिभित्र अमेरिकाको एउटै भित्री योजना लुकेको छ–चीनलाई एक्ल्याउन एसियाका तीन ठूला मुलुक अष्ट्रेलिया, भारत र जापानलाई प्रयोग गर्नु । यसबाह
राजकुमार दिक्पाल एक महिनायतादेखि मेरो आँखामा राम्ररी निद्रा परिरहेको थिएन । त्यो बेला म आँखा उघारेरै एउटा सपना देखिरहेको थिएँ । एउटा छात्रवृत्ति खुलेको थियो । इन्टरनेशनल पीस स्टडिज विषयमा पोस्ट ग्य्राजुएटका लागि थियो, त्यो छात्रवृत्ति । नेपाल शान्ति प्रक्रियामा गुज्रिरहेको समय थियो । मलाई पनि पढ्न जान मन लाग्यो । म छात्रवृत्तिमा त जाऊँला, तर परिवारको वृत्ति कसरी चलाउने ? यहीँ थियो चिन्ता । तर त्यो सपनाका कारण म एक महिनादेखि राम्ररी निदाउन सकिरहेको थिइनँ । तर मैले जब आफूभन्दा अरु धेरै आँखाहरुलाई देखेँ । मेराभन्दा कलिला तिनै आँखाहरुमा मैले आफ्नो सप्तरङ्गी इन्द्रधनुषी सपनाहरु देखेँ, त्य
श्राद्धको नवीन शैली
‘श्रद्धया क्रियते इति श्राद्ध’ अर्थात् श्रद्धापूर्वक सम्पन्न गरिने काम नै श्राद्ध हो । यही उद्देश्यले पुर्खाहरूले श्राद्धको सुरुवात गरेको देखिन्छ । दिवङ्गत पितृहरूको योगदानलाई श्रद्धापूर्वक सम्झनु र उनीहरूप्रति कृतज्ञता भाव प्रकट गर्ने श्राद्धको सर्वोपरि महŒवको विषय हो भने यसैलाई केन्द्र बिन्दुमा राखेर श्राद्धको नवीन विकल्प विषयको चर्चा यस लेखको मूल आशय हो । ऋग्वेद, विष्णु पुराण, नृसिंह पुराण र गरुड पुराणआदि ग्रन्थहरूमा श्राद्धका विषयमा यथोचित चर्चा गरिएको पाइन्छ । मानव पुर्खाहरूले श्राद्धलगायत अनेक संस्कार र संस्कृति निर्माणमा तत्कालीन सोचअनुसार अनेक प्रयोग, प्रवद्र्धन तथा
प्रकाशित मितिः भदौ २२, २०७७
त्रिभुवन विश्वविद्यालयको ढिलासुस्ती
कोरोना भाइरसका कारण सिकाइमा परेको असरलाई न्यूनीकरण गर्न सरकारले विभिन्न वैकल्पिक उपायको अवलम्बन गर्न आह्वान गरेकोे धेरै समय भइसक्यो । विद्यालय तहदेखि विश्वविद्यालयसम्मकै शैक्षिक सत्र खेर जान नदिन सरकारले विभिन्न उपायहरू अवलम्बन गर्दै आएको छ । यस क्रममा विद्यालयको आन्तरिक मूल्याङ्कनबाटै माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) सम्पन्न भई राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डबाट प्रमाणीकरण समेत भइसकेको छ । त्यस्तै कक्षा ११ को वार्षिक परीक्षा सञ्चालन गर्ने अभिभारा पनि सम्बन्धित विद्यालयलाई नै तोकिएको छ । कोरोना त्रासका बावजुद पनि धेरैजसो विद्यालयले अहिले विद्यार्थी भर्ना तथा परीक्षा लगायतका गतिविधि अघि बढाएका छन् । विद्